Nlegharị anya na Tel Aviv | Akụkọ Njem
Nlegharị anya na Tel Aviv
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Tel Aviv
Na Mediterranean osimiri Israel bụ obodo nke Tel Aviv, nke abụọ kacha biri na mba ahụ. Kemgbe 2003 bụ World Heritage Ọ bụ ezie na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụghị nke kacha adọrọ mmasị maka njem nleta n’Izrel, nke bụ eziokwu bụ na nke a anaghị egbochi ọtụtụ puku ndị njem na-abịa kwa afọ iji hụ ya.
Na gafee Jerusalem, Tel Aviv bụ obodo tozuru ileta. Ọ bụ ya mere anyị ji ahapụ ụfọdụ ozi bara uru banyere ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eleta na Tel Aviv.
2 Ihe ịga leta na Tel Aviv
3 24 awa na Tel Aviv
4 Tel Aviv gafere
E hiwere ya na mbido narị afọ nke XNUMX na ntụgharị aha ya site na Hibru bụ ugwu ugwu. Ruo oge ụfọdụ ọ bụ isi obodo, n'oge, na Egypt na Iraq tụrụ bọmbụ na Gulf War ikpeazụ. Ọ dịbeghị anya na Jeruselem, naanị ihe dị ka kilomita iri isii Naanị 90 site na Haifa. O nwere oge ọkọchị na udu mmiri dị jụụ.
Dị ka m kwuru n'elu Ọ bụ World Heritage Site dị ka ọ nwere otu ìgwè na-adọrọ mmasị nke ụlọ Bauhaus. Enwere ụlọ dị ka nke a n’ụwa niile mana onweghị ebe dị ọtụtụ na Tel Aviv, bụ ebe ụdị a rịrị elu n’afọ 30 mgbe mbata ndị Juu kwagara Jamanị gbanahụ ọmụmụ ndị Nazi.
Ihe ịga leta na Tel Aviv
Enwere agbata ise n'obodo: a na-akpọ White City, Jaffa, Floretin, Neve Tzedek na osimiri. White City bụ mpaghara ahụ bụ ihe nketa ụwa ma ị chọta ya n’etiti okporo ụzọ Allenby na Begin na Ibn Gvirol, Osimiri Yarkon na Oke Osimiri Mediterenian. Thelọ niile dị ọcha, n’ezie, ma eweghachiri ha oge.
Ga-agagharị n'okporo ụzọ Rothschild Boulevard, ya na kiosks ya mara mma n'etiti yana ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ya dị jụụ. Ọzọkwa n'okporo ámá Sheinkin, nke bụ akara nke Tel Aviv, yana ụlọ ahịa ndị na-ere mmanya, ndị na-ere ahịa na ụlọ ahịa. Ọ bụ agbata obi dị oke mkpa.
Jaffa nke dị na ndịda Tel Aviv na ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ochie na site na oge toro. Ọ mara mma maka ikuku ochie ya, maka ahịa flea ya, n'okporo ámá ya na ngwakọta a na-ekwenyeghị na ya nke ọdịbendị ndị Juu na nke Arab. Ọdụ ụgbọ mmiri ahụ bụkwa ebe dị mma yana obere ụgbọ mmiri ya na ụlọ nri ya na kọfị na ahịa ya na echiche ndị dị na Tel Aviv.
Floretin Ọ bụkwa n'ebe ndịda ma ọ ga-abụ ihe dị ka Soho na Tel Aviv. Ọ bụ agbataobi ochie na, ọ bụ ezie na ọ gbanweela oge, ọ gbanwebeghị nke ukwuu nke mere na ọ pụrụ iche. Ọ bụ akụkụ ka daa ogbenye na ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọdịiche. Nwere ike ịga ije na Levinsky Market, yana ngwaahịa Greek, Turkish na Romania, ma ọ bụrụ na ị nọọ abalị, enwere ụlọ mmanya dị ọnụ ala ma ndị mmadụ na-esitekarị na etiti ahụ.
Neve tzedek bụkwa otu nke ógbè kacha ochie nke Tel Aviv ma n’otu oge ahụ ọ ghọọla ezigbo ejiji ma e weghachiwo ya nke ọma. O sitere na ngwụsị narị afọ nke XNUMX ma bụrụ obodo ndị Juu mbụ na-abụghị Jaffa. O nwere uzo di warara, otutu uzo owuwu uzo, veranda, ulo ahia, ulo ahia na ulo nri ndi nwere ogige ndi ozo ebe odi nkpa ikwusi mmanya.
N'ikpeazụ, enwere tel aviv osimiri a na-emegide nke ọtụtụ kilomita megide ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ. Ọ bụ otu n’ime osimiri ndị kachasị ogologo n’osimiri Mediterenian na ọkọchị ọ jupụtara na ndị njem nleta na ndị obodo na-abịa iji mmiri ya na-ekpo ọkụ. N'ịbụ nke sara mbara, enwere ohere maka mmadụ niile. Ọbụna osimiri nke Hilton Hotel mara maka ịbụ nwoke nwere mmasị nwoke n'ụsọ osimiri par kacha mma na Gordon-Frishman osimiri bụ ejiji ejiji ebe. Enwekwara banana Beach, Dolphinarium na Alma Beach.
24 awa na Tel Aviv
I no na Jerusalem ma choo ibanye na Tel Aviv? Yabụ ị ga-ahazi oge ntakịrị, pụọ n'isi ụtụtụ ma rite uru. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge ọkọchị, ị ga - anọ ọtụtụ awa n’akụkụ osimiri ka ị nwee ike bido na Jaffa ịnụ ụtọ ọdụ ụgbọ mmiri, rie nri ụtụtụ n’akụkụ oke osimiri wee jee ije. Neve Tzedek bụ ọnụ ụzọ na-esote ka ị nwee ike ịgbakwunye ya na njem ahụ ma rie nri ehihie ebe ahụ.
N'ehihie ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịnụ ụtọ osimiri ma ọ bụ ịga leta otu n'ime ọtụtụ muselọ ihe ngosi nka nke Tel Aviv nwere: Museum nke ndị Juu, Museum nke Land of Israel, nke bụ isi ụlọ ihe mgbe ochie, ndị Bauhaus ngosi nka (Rịba ama na ọ na-emeghe naanị ụbọchị abụọ n'izu, Wenesde na Fraịde) ,, Tel Aviv History Museum, Azrieli Observatory nke ị nwere ike isi hụ obodo ahụ na kilomita 50 nke ụsọ oké osimiri, ọ dịkwa n'efu, umslọ ngosi ihe mgbe ochie raara nye ndị mmadụ dị mkpa ma ọ bụ nkà.
N’abalị obodo ahụ nwere ndụ abalị dị ukwuu nke ahụ na-adịru ụtụtụ niile. Nwere ike ịga nri abalị wee pụọ n'ịgba egwu ma ọ bụ n'ụlọ mmanya ebe ọ bụ na ebe ndị a na-ejupụta n'etiti abalị.
Tel Aviv gafere
Ọ bụrụ n ’otu ebe ịnọ abalị na Tel Aviv, ị ga - eji ụbọchị nke abụọ mee ihe ụbọchị na-aga, getaways. masada n'ihi na m na ọ bụ nke mbụ njem mmụta na-agaghị Agbaghara. Ọ bụrụ na ị gafeela afọ 40, ị ga-echeta otu kpochapụwo Hollywood a na-akpọ Masada.
Nke a bụ aha mkpọmkpọ ebe nke ebe ewusiri ike na obí eze dị n'ọzara, n'ugwu, nke guzogidere mwakpo nke ndị Rom ogologo oge, mechara daa na ndị lanarịrị ya gburu onwe ha, ọ bụ ya mere ha ji ewere ha dị ka ndị nwụrụ n'ihi okwukwe. Ọ bụkwa Ihe Nketa Worldwa.
Nwere ike ịga Masada mee otu Njem Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ n’otu oge, dịka ọmụmaatụ. I nwekwara ike ịgbakwunye ọbịbịa ahụ Ein Gedi oasis, gaa hiking na kpọgidere na nzuzo Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ. Ma ọ bụ ọbụna, nleta Petra, nke dị nso na Jọdan. Agbanyeghị, nke a gụnyere njem ụgbọ elu. Gị onwe gị kwa pụrụ ime otú ahụ gaa leta Caesaea na Galili, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ikpe ikpe azụ akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ n'ihi na njem ahụ gụnyere nleta Nazaret.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tel Aviv » Nlegharị anya na Tel Aviv
Ihe ịga leta na Veracruz, Mexico